Taliyihi hore ee Ciidamada Milatariga Burundi oo la Dilay – Radio Daljir
Agoosto 16, 2015 8:11 b 0
Axad, Ogoosto 16, 2015 (Daljir) —Dabley aan haybtooda la garanayn ayaa Sabtidii shalay ku dilay Bartamaha Magaalada Burundi Taliyihii Hore ee Millateriga Dalkaas, Col. Jean Bikomagu, isagoo noqonaya sarkaalkii labaad oo Bujumbura lagu dilo bishan gudaheeda.
Taliyaha la toogtay ayaa la sheegay in lagu toogtay illinka hore ee gurigiisa xilli aroor ah, isagoo kasoo laabtay kaniisad, waxaana dad goobjoogayaal ah ay laga soo xigtay in gabar yar oo uu dhalay oo la socotay iyadana si xun loo dhaawacay loona cararay isbitaalka.
Kooxo hubeysan ayaa horraantii bishan Ogoosto ku toogtay Bujumbura taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada Burundi, kaasoo si aad ah ugu dhawaa madaxweyne Nkurunziza oo ah madaxweynaha dalkaas, dhawaanna mar saddexaad xilka loo doortay.
“Burundi Waxay ahayd Maalin kale oo Madow, Waayo Waxaa la dilay Sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidamada Burundi, kaasoo lagu magacaabi jiray Col. Jean Bikomagu… Waa arrin murugo badan oo naxdin leh,” ayuu Facebook-giisa ku qoray Afhayeenka Madaxtooyada dalka Burundi, Willy Nyamitwe.
Col. Bikomagu ayaa ahaa Taliyaha ciidamada Millateriga Burundi intii uu ku jiray dalkaas Colaaddii Sokeeye ee billaabatay 1993-kii. Wuxuuna markii dambe noqday hoggaamiyaha mucaaradka Tutsiga, wuxuuna xilligaas dagaallo kula jiray Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza oo isna xilligaas Madax u ahaa Xoogaggii Huutuuga.